Iveki elandelayo yaseMoscow Fashion iveziwe
Namhlanje, ngo-Matshi 25, 2015, kwi-Gostiny Dvor edumileyo yaqalisa umcimbi wefestile wendabuko "Iveki yeFashion eMoscow. Yenziwe eRashiya ", kwaye yavula umboniso wayo wokuqokelela kwangoko" ye-pret-por-porter "indlu yefashini iValentin Yudashkin.
Ndimele ndithi, yile ngqokelela yeqhekeza enomdla okhethekileyo kubabusi baseRashiya befashoni - kwaziwa ukuba uqokelele ukuthengiswa kwaye wayexabiswa kakhulu ngabagxeki befashoni kwiVeki yeFashion eParis. Ukuqokelela iValentine Yudashkin ngexesha lekwindla-ebusika 2015-2016. ezinikele "kumangaliso wesibhozo wehlabathi" kunye neyona nto imfihlelo enkulu yekhulu lama-20 - i-Amber Room. Iphethwe phantse kuwo onke amathoni afudumeleko, kwaye iifrimpthi zenziwe ngokusekelwe kwiplani yokwakha eyakhiwa kwakhona kwiNdlu yaseTsarskoselsky.
Njengengxenye yeveki yamaPhepha, imizekelo yabalweli abadumileyo kunye nabaqala kulindeleke: uMaria Moroschek, u-Natalia Valewska, uSergei Sysoyeva, uSophie Stratcuto, u-Hayama Khanukaeva, uShamkhala, i-Teplitskaya Design, uSieben Erzgebirge, uAlexander Arutyunov, uEleonora Amosova, uGalina Vasil`eva, INSHADE, Lisa Romanyk, ODRI, Vera Kostyurina, YanaStasia nabanye abaninzi. Ukongezelela kwimiboniso, iiveki leMfashini iza kubakho kwiinkomfa zababonisi baseMoscow kunye neentetho, iitheyibhile ezijikeleziweyo kunye neeseshoni ze-autograph kunye nokuthatha inxaxheba kweengcali zemisebenzi eyahlukeneyo, enye indlela enxulumene nefestile yehlabathi.
Iqoqo elitsha likaClaudia Schiffer ngeTe
I-Old-good England eqokelelwayo entsha yeBurberry kwangaphambi kokuwa 2016
Impumelelo kaVictoria Beckham kwiveki yeFashion kwiNew York
Iindidi zamanqaku adumile adluliselwe iiyure kunye ne-Actions Activité Pop
Ukuhlanganiswa kwemithi yomndeni
Ikhefu elomileyo lokuluma
Ukuzibheka ukuya eLondon iintsuku ezi-3
Indlela yokukhetha indlela yokulungisa imibimbi ecaleni kwamehlo
Indlela yokunyanga i-bronchitis ephazamisayo kunye nezilwanyana zomntu
Isifuba somfazi, umphefumlo onomsindo obandayo
Ukuphucula imidlalo yabantwana